Kenya oo u hanjabtay qaswadayaasha nabada Soomaaliya! | Subulaha News Network
You are here : Subulaha News Network » NEWS » Kenya oo u hanjabtay qaswadayaasha nabada Soomaaliya!
Kenya oo u hanjabtay qaswadayaasha nabada Soomaaliya!
Posted by admin on August 17th, 2012 11:45 PM | NEWS Madaxweynaha dalka Kenya Kibaki ayaa waxa uu sheegay in dowladiisu ay cunoqabatayn ku soo rogeyso dadka banaanka isa soo dhiga oo curyaaminaya nabada iyo xilliga kala guurka.
Kibaki ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay feejignaadaan ayna iska ilaaliyaan isku day kasta oo lagu doonayo in wadada looga weeciyo hirgelinta qorshaha siyaasada ee Roadmapka ee la isku raacay in loogaga baxo xilliga kumeelgaarnimada.
Kibaki ayaa ka digey in aan loo dulqaadan doonin cid kasta oo carqaladaynaysa ama kahorimaanaysa roadmapka oo ah waddo xal waara oo joogta ah u keenaya Soomaaliya.
“Kuwa doonaya in ay jahawareeriyan nabada waxaa si shaqsiyan ah loogu qabsan doonaa falalka ay ku dhaqaaqaan, kan dowlad ahaana waxaan si aan leexleexad ku jirin u soo bandhigeynaa una gooni yeelaynaa annagoo weliba ku soo rogayna cunoqabatayn ciqaab leh,”ayuu ku sheegay bayaan uu soo saaray madaxweyne Kibaki .
Madaxweyne Kibaki ayaa tilmaamay in natiijada kuwa qaska wada ay hore qaraar uga soo saartay Qaramada Midoobay,Midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD. Warkan ka soo baxay madaxweynaha dalka Kenya Kibaki ayaa waxaa uu ku soo dhoweeyey ansixinta dastuurka ay dhowaan golaha ansixinta dastuurka Soomaaliyed ku ansixiyeen magaalada Muqdisho waxana uu ku tilmaamay in ay arrintaasi ay ahayd horumar weyn oo qiime leh oo dhinaca hirgelinta qorshaha Roadmapka loo qaaday.
“Kenya waxa ay garowsan tahay soo xulida xubnaha baarlamaanka iyo doorashada afhayeenka iyo kuxigeenadiisa iyo doorashada madaxweynaha oo ugu dambayntii in la soo dhiso dowlad rasmi ah kadib muddokabadan labaatan sano inay u tahay mid taariiqi ah Soomaaliya.”ayuu yiri Kibaki.
Madaxweyne Kibaki ayaa ku ammaanay hogaamiyaasha Soomaaliyeed sida ay ugu dadaaleen dhaqangelinta heshiiskii nabada ee Roadmapka loogaga gudbayay xilliga kalaguurka.
Kibaki ayaa hambalyo ku aadan ciidul Fitriga u direy madaxda iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed isagoo sheegay in ciidda sanadkan ay ku soo beegantay iyadoo laga baxayo xilligii kumeelgaarka ahaa loona guurayo dowlad rasmi ah.
Warkan ka soo baxay dowlada Kenya ee deriska la ah dalka Soomaaliya ayaa ku soo beegmay xilli ay dalka Soomaaliya uu ku jiro marxalad xasaasi ah laguna mashquulsan yahay soo xulida xubnaha baarlamaanka Soomaliyeed.
« Waraysi dhinacyo badan tabanaya oo uu bixiyey Ma;xed Ibrahim oo ka mid ah golaaha dheexe ee Awdalstate of Somalia.(VIDEO)
Magacyadda Xubnaha Somaliland Kaga Jira Baarlamaanka Cusub Ee Somaliya Oo Uu Ka Mid Yahay Guddoomiyaha Baanka Dhexe Walaalkii Iyo Jaamac Odey Oo Laga Reebay Liiska »